ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန် ဆူးအက်တူးမြောင်းတွင် ပိတ်မိနေခဲ့သော သင်္ဘောကြီး ချင်းသောင်မြို့သို့ ရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
ပြီးခဲ့သော မတ်လက ဆူးအက်တူးမြောင်းတွင် တစ်ပတ်နီးပါးကြာ ပိတ်မိနေခဲ့သော Ever Given သင်္ဘောကြီးအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် ချင်းသောင်မြို့ရှိ Qingdao Beihai သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးအကြီးစားကုမ္ပဏီသို့ ပို့ဆောင်ပြီးနောက် ကျောက်ချထားသည်ကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ချင်းသောင် ၊ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပြီးခဲ့သော မတ်လက ဆူးအက်တူးမြောင်းအတွင်း အချိန်တစ်ပတ်နီးပါးကြာ ပိတ်မိနေခဲ့သော Ever Given ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးသည် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ချင်းသောင်မြို့သို့ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သင်္ဘောဦးပိုင်းတွင် အဓိက ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသော ယင်းသင်္ဘောကြီးအား ချင်းသောင်မြို့ရှိ Qingdao Beihai သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးအကြီးစားကုမ္ပဏီတွင် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်အားဖြင့် ရက်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တာဝန်ရှိသူများက သင်္ဘောဝင်ရောက်ခွင့် ခွင့်ပြုချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်းသင်္ဘောကြီးအား ကမ်းသို့အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆိုက်ကပ်နိုင်ရေး ရေလမ်းကြောင်း ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် ကင်းလှည့်မော်တော်ဘုတ်များ စေလွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ချင်းသောင်ရေကြောင်းလုံခြုံဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Zhang Zhigang က ပြောကြားခဲ့သည်။
Ever Given သင်္ဘောကြီးကို ဂျပန်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် Evergreen Marine Corp မှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရှိကြောင်း ၊ ယင်းသင်္ဘောကြီးသည် ပြီးခဲ့သော မတ် ၂၃ ရက်က ဆူးအက်တူးမြောင်းအတွင်းနွံနစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဆွဲသင်္ဘော ၁၀ စင်းအကူအညီဖြင့် ရေပေါ်ပြန်ရောက်အောင် ဆွဲတင်ခဲ့ရခြင်းနှင့်အတူ မတ် ၂၉ ရက်အထိ ကမ္ဘာ့ပင်လယ် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အဟန့်အတားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Ship that blocked Suez Canal reaches Qingdao for repairs
QINGDAO, Oct.4(Xinhua) — Giant cargo ship Ever Given that blocked the Suez Canal for nearly one week in March reached east China’s coastal city of Qingdao for repairs on Monday.
The vessel, which was mainly damaged in the bow, will undergo repairs for more than 20 days inashipyard of Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd.
Authorities handled the ship’s entry approval procedures and dispatched patrol boats to organize maritime traffic for its smooth berthing, said Zhang Zhigang, an official with the Qingdao Maritime Safety Administration.
The Ever Given, owned byaJapanese company and operated by Evergreen Marine Corp. based in China’s Taiwan, ran aground in the Suez Canal on March 23 and jammed global shipping traffic until it was refloated on March 29 with the help of more than 10 tugboats. Enditem
Photo taken on Oct. 4, 2021 shows the Ever Given container ship berthed ataship-repairing dock of Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. in Qingdao, east China’s Shandong Province. The Ever Given container ship which blocked the Suez Canal for nearlyaweek in March arrived in Qingdao on Monday for repair. (Xinhua/Li Ziheng)